Nagu saabsan - Shijiazhuang Weligeedba Bright Trading Co., Ltd.
Dharka roobka ee Polyester
PVC Raincoat iyo Poncho
PE Raincoat iyo Poncho
EVA Raincoat iyo Poncho
PEVA Raincoat iyo Poncho
Shijiazhuang Forever Bright Trading Co., LTD waa shirkad xirfadle ah oo wax ku ool ah noocyada kala duwan ee alaabooyinka aan biyuhu karin in ka badan 10 sano. Shirkaddayadu waxay ku hawlan tahay wax soo saar, wax ka qabashada iyo bixinta dhammaan noocyada dharka roobka. Waxaan bixin karnaa Ragga Rakoobo, Mudanayaal Raincoat, Carruurta Raincoat, Jaakada Ragga, Duufaanta dabaysha, PVC Raincoat, EVA Rainwear, PE Rain Poncho, Apron, Dharka Ammaanka iwm Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu soo saaray iyadoo la isticmaalayo alaabta ceeriin oo tayo sare leh, oo laga soo iibiyay warshadaha lagu kalsoon yahay . Wax soosaarkayaga qumman wuxuu ka yimaadaa kooxda aadka waxtarka u leh, nidaamka maareynta dhammeystiran iyo ruuxda adag ee raadinta tayada. Wax soo saarkayagu si ballaadhan ayaa loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin adeegsadayaashu waxayna la kulmi karaan si joogto ah isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho Macaamiishayada ugu horreeya wali way nala shaqeynayaan! Waxaan bixinaa adeegga ugu fiican oo si taxaddar leh u xakameynaa tayada! Waxyaabaha aan iibsanayno ee sanadlaha ah oo haatan qiimihiisu yahay USD2,000,000, suuqyadeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Afrika, iyo Aasiya ...
Marka laga reebo wershedeena xirfadeed ee roogga, weli waxaan haysannaa gurigeenna daabicitaan. Gurigayagu daabacaada wuxuu ku yaalaa magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei. Waxaan haynaa in ka badan 50sets mashiinada daboolida kuleylka, 10sets mesh Khadadka daabacaadda iyo 8sets makiinadaha daabacaadda kuleylka. Waxaan khibrad u leenahay daabacaadda, waxaan daabacan karnaa nooc kasta oo walxaha ah sida Polyester, Nailon, PVC, EVA, PE, PU, ​​TPU iwm Waxaan daabacan karnaa nooc kasta oo nashqadeyn daabacadeed ah oo ay kujiraan daabacaadda mesh, daabacaadda CMYK, daabacaadda wareejinta kuleylka, REFLECTIVE daabacaadda, daabacaadda midabka iyo daabacaadda 3D.
Waxaan qiimeynaa fursada wanaagsan ee aan xiriir ganacsi kula yeelan karno macaamiisha adduunka oo idil. Tan gudaheeda, waxaan ku sameyneynaa sida ugu fiican go'aankeena iyo xoogga rabitaanka. Ujeeddadeennu waa badbaado, tayo sare leh oo tayo sare leh. Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto ganacsiga mustaqbalka, waxaan kugu abaalmarin doonnaa adeegga ugu fiican iyo wax soo saarka ugu tayada sarreeya.
Shijiazhuang Weligiis Bright Trading Co., Ltd.
Cusbooneysiin, shaqeyn, iyo buuxinta baahiyaha macaamiisha.
Cinwaanka:Cutubka 904-905, Dhismaha Dhismaha, No.355 South Youyi Street, Shijiazhuang, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Alaabada Kulul, Khariidadda bogga
Peva Raincoat, PCV Poncho, Haweenka Koodhka Roobka, PCC Raincoat, Carruurta Pu Raincoat, Pu Raincoat,